သင်္ကြန်သီချင်းများ | Myanmar Mp3 Album | Page 4
R-PHYO – Hip Hop သင်္ကြန်
အခုနှစ်သင်္ကြန်မတိုင်ခင်မှာ ၀ါသနာရှင်တွေဖန်တီးထားတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းတွေတော်တော်များများထွက်ရှိလာတယ်ဗျ…. အဲ့ထဲကမှ… “အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်… အားလုံးလည်းကြိုက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဆိုတဲ့… ညီငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ပါဗျာ… ဒီသီချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ 2010 ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန်ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်ဗျာ….
March 29, 2010 koyazar အဆိုတော် (ကျား) သင်္ကြန်သီချင်းများ Unreleased Albums6Comments
ပိုးအိစံ – အကဲလေးသင်္ကြန်
၀၁။အကဲလေးသင်္ကြန် ၀၂။စပိုင်ချစ်သူနဲ့သင်္ကြန် ၀၃။ရေတွေကုန်အချိန်တွေကုန် ၀၄။မထိလို့လားမငြိမိလို့လား ၀၅။မနေတတ်ဘူး ၀၆။လာကလိုက် ၀၇။ဆိုင်ကယ်စီးပြီးလည်မလား ၀၈။သင်္ကြန်အလှူပွဲ ၀၉။ခန့်ချောကြီး ၁၀။တန်ခူး မနှစ်ကသင်္ကြန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ အယ်လ်ဘမ်ပါခင်ဗျာ။ အသစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
March 8, 2010 Snuo Mwoani ပိုးအိစံ သင်္ကြန်သီချင်းများ 1 Comment
သင်္ကြန်နီးလာပြီဆိုတော့ အမှတ်တရအနေနဲ့ 1990 လောက်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Dance သီချင်းလေးတွေကို စုစည်းထားတဲ့ Playlist တခုပါ။ 1 ) Barbie Girl – Aqua 2) Happy Boys And Happy Girls – Aqua 3) Dr Jones – Aqua 4) Doo Dah – Cartoons 5) Witch Doctor – Cartoons 6) Calcutta – Dr.Bombay 7) My Sitar – Dr.Bombay 8 ) Doh Wah Diddy – Fun Factory 9) … Continue Reading →
February 24, 2010 amedeo သင်္ကြန်သီချင်းများ 8 Comments
T-Home @ ရန်ကုန်သင်္ကြန် ၁
၀၁။ နှစ်ယောက်အတူ – Cobra ၀၂။ ရွာပါသင်္ကြန်မိုး – ဖြိုးကြီး ၀၃။ လန်းတဲ့သင်္ကြန် – သျှီ ၀၄။ ကတိပျက်တဲ့ချစ်သူ – ပူစူး ၀၅။ ရည်းစားအလိုရှိတယ် – ဇမ်နူး ၀၆။ ရှောင်ဖယ်မနေနဲ့ – ဇော်ပိုင် ၀၇။ အကဲပြိုင်မလား – ချစ်ကောင်း ၀၈။ စကားလုံးမဲ့သင်္ကြန် – ကြိုးကြာ ၀၉။ သင်္ကြန်စာ – ကောင်းထက်၊ The Trees ၁၀။ ရွှဲအောင်လောင်းပါ – သီရိ ၁၁။ လောင်းလိုက်လန်းလိုက် လန်းလိုက်လောင်းလိုက် – ဖိုးကာ ၁၂။ တွဲပြီးတော့က – ပြည့်ဖူးခိုင် ၁၃။ သင်္ကြန်ရည်းစား – ကောင်းထက် … Continue Reading →
February 5, 2010 ME *MMA* ဖြိုးကြီး ကြိုးကြာ ဖိုးကာ အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ပြည့်ဖူးခိုင် ဇမ်နူး ချစ်ကောင်း မျိုးကျော့မြိုင် သင်္ကြန်သီချင်းများ New Myanmar Albums 8 Comments
သင်္ကြန်သီချင်း – ရွှေထိုက် ၊ ပိုးအိစံ
၀၁ ။ ဟိုးတား – ရွှေထိုက် VCD ၀၂။ မထိလို့လား မငြိလို့လား – ပိုးအိစံ VCD သီချင်းတွေက ဘယ်ခွေမှာပါတာလည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူးခင်ဗျာ ။
April 14, 2009 Snuo Mwoani ပိုးအိစံ ရွှေထိုက် သင်္ကြန်သီချင်းများ 1 Comment
DJ Jay & မိုးမိုး – သမ္ဘာရ ဂြိုဟ်သားများ Rock in Remix
Feat: ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ ဟန်ထူးလွင်(Big Bag)၊ ရသ ၁။ ဒီးဒိုးဒီး ၂။ စိတ်လျှော့ ၃။ အသည်းကွဲရေဒီယို ၄။ သမ္ဘာရဂြိုဟ်သားများ ၅။ လူလိမ်ကြီး ၆။ ကိုရီးယား ၇။ လေလိုဘ၀ ၈။ ဘ၀င်စိတ် ၉။ လူလိမ်ကြီး (Instrumental) ၁၀။ လူလိမ်ကြီး (Accapella)
April 10, 2009 mmsong အခွေ (အများ) မိုးမိုး သင်္ကြန်သီချင်းများ DJ Jay New Myanmar Albums 35 Comments
၀၁။ ပိတောက်အချစ်လေး – ဇော်ဝင်းထွဋ် ၀၂။ အသစ်ရဲ့အစ – သက္ကရာဇ် ၀၃။ တူးပို့ သူမနှင့်ကျွန်တော် – မင်းသူရ ၀၄။ အရမ်းလန်းတယ် – စည်သူလွင် ၀၅။ ငါမုန်းတဲ့သင်္ကြန် – အုတ်ကျော် ၀၆။ စာမျက်နှာသစ် – သက္ကရာဇ် ၀၇။ အဆုံးသတ်နေ့ရက် – စောကြီး ၀၈။ နှစ်သစ်တေး – ရင်ဂို ၀၉။ မင်းမရှိတဲ့… – အုတ်ကျော် ၁၀။ နှစ်သစ်သီချင်းသစ် – ဇော်ဝင်းထွဋ် ၁၁။ ဒဏ်ရာဟောင်းနဲ့လူ – သက္ကရာဇ် ၁၂။ သင်္ကြန်ကျပြီ – မင်းသူရ
March 8, 2009 ME *MMA* အခွေ (အများ) သက္ကရာဇ် သင်္ကြန်သီချင်းများ Myanmar Artist5Comments